Wholesale Downhole Motor fekitari uye bhizimisi | YakadzikaFast
Isu tinokupa iwe akasiyana siyana zvigadzirwa neakasiyana ehunyanzvi maratidziro kune ese mashandisiro, kusanganisira zvetsika zvinodiwa.
Motors edu anowanikwa mune akasiyana masisitimu ezvimwe zvinodiwa.
Rotors uye Stators
Isu tinopa zvikamu zvepasirese zve rotors uye stators muhurefu hwakasiyana uye hukuru.
Mwoyo wema mota edu, zvikamu zvemagetsi zvinowanikwa mukugadzirisa kwakawanda. Yedu yakakodzera mvura-based muds (WBMs), mafuta-based muds (OBMs), agitators, uye kumwe kunyorera.
Shock Chishandiso system
Iyo SGDF Shock Turu Sisitimu inogona kudzikisira kukakavara uye zvinoshamisa kuvandudza huremu kutapudza nekugadzira zvinyoronyoro oscillation, nokudaro ichivandudza mhando yechitubu mune mashoma maitiro akaomarara. Iyo SGDF Shock Turu Sisitimu inowedzera iko kuchera kugona kwechero nzira yekuchera mune kukakavadzana iri nyaya.
Centering zvinhu zvinowanikwa mune chero dhizaini uye gadziriso.
Chirevo chedu: "Tinogara tichiwana mhinduro" ---
kunyangwe mune zvakanyanyisa mamiriro uye akaoma mamiriro
Yakakwira-torque Inoda Kuchera Mabasa
Yakaomarara, yakaoma mabasa haina kuenzana neyedu yakaoma mota.
Mota dzedu dzakavakirwa zvakanyanya kudhiraivhi pasi penzvimbo dzakanyanyisa munzvimbo ine makomo, pasi pekupisa kwakanyanya, uye kana torque yakanyanyisa ichidikanwa.
Kuderedza mutengo kwakakosha kune wese munhu. Ndosaka tichipa marefu-ehupenyu mota dzemota uye hwakawedzerwa hupenyu hwese hwezvinhu zvemota.
Yedu yakaratidza track rekodhi yeakakwira-mashandiro emota inoreva kukwidziridzwa kwepamusoro uye nemitengo yakaderera yekuchera kwako.
Motors edu anomhanya akawanda maawa asina kugadziriswa.
Zvimiro uye Tekinoroji
Zvigadzirwa zveDeepFast zvinobatanidza nyika-ye-iyo-art elastomers yeGerman, dhizaini dhizaini, uye kutonga kwehunhu. DeepFast inopa iyo stator inowanikwa neNBR uye HNBR elastomers zvichibva parudzi rwevhu. Nhanho yega ye stator inogadzira uye nzira yekushandisa inonyatso tariswa kuti ive nechokwadi cheiyo stator.
DeepFast rotors inogadzirwa nesimbi-yegiredhi simbi uye chaiyo-yakasungirirwa pane yakasarudzika yekugaya michina. Kuti uenzane nezvinodiwa zveimwe purojekiti kunyorera, DeepFast rotors akanyatso kumisikidzwa kune akasiyana urefu. Iwo ma rotors itsika-yakasarudzwa kuti ikwane yega yega yekunyorera application. DeepFast rotors ndeye chrome-yakafukidzwa nehunyanzvi hweGerman. Kune madhaka ane munyu ane yakanyanya chloride yezvinyorwa, DeepFast inogona kupa carbide yakavharwa macors.
Angangoita 50% imwe torque kupfuura yakajairika downhole motors.
Angangoita zana% akavandudza mashandiro achienzaniswa neayo eakajairika mamota ekudonha nekuda kwemashanu-axis ekugaya michina kana ma rotors nemamaki.
Kusvika 175 ° C mune yakaoma mamiriro.
Dhiziri, oiri isina kugadzirwa, mafuta chena ehunyanzvi. Inokodzera kutenderera.
Inoshanda saizi yetsime 8 3/8 "~ 9 7/8"
Yepamusoro Thread Kubatanidza NC 50 Bhokisi
Pazasi Thread Kubatana NC 50 PIN
Highest Temperature Nemishonga
Kuyerera Rate Range 1000 ~ 2500 L / M 265 ~ 660gpm
Yekumhanya Speed 42 ~ 104 RPM
Max Diff Dzvinyiriro 6MPa
Kushanda Kushushikana Kushushikana 4.5 MPa
Max Simba 122.5Kw
Max Kusimudza Kurema
Kuvhara Chinhu Chinodiwa Dhayamita <7mm
Chloride Zvemukati <50000 PPM
Kurudzira Oiri-Yakavakirwa Mud Mudha Aniline Point ≥70 ℃
Simba Chikamu Kushushikana
Pashure: Chikamu cheMagetsi